Oromo News 07.19.21 | KWIT
Garuu CDC akka jedhetti barattooni talaali corona virus hin fudhatin fi nama qabame waliin walitti dhufeenya dhiheenya kan qaban yoo tae adda bafamani taau qaban jedhan.
Woodbury County keessati namni amma qabame percent jiruu 2% torbaan darbe keessa akka tae himan. Counties Siouxland baayyini isaa percent wayta kaahamu namni qabame zero akka tae himan.
Department barumsa kan South Dakota manneen barumsa keessati medical marijuana akka hayyamamu yaali lammafaa godheen milkaahe jira.
State seera waggaa darbe baheen qophii medical marijuana irrati dalaguuf qophaaha ture. Garuu program kana irrati wayta garii waae hin taane irati argani jiru.
Obboleessa isaa kan dingata ajjeese bakka Adventureland keessati mallattoota waan san sirreeesu xiqqoo arguu jiraachu isaani himan.
Abukaaton warraa akka jedhanitti umrii 16 kan tae David Jaramillo Jr. bakkaa sodaachisa keessa akka turuu himan, garuu haali arguu waan dabalaa deemu jiruuf beekamtii fi deebi kennuu akka dandau himan.
Haatu malee, mucaa xiqaan kun waa yaadachuu dadhabuu fi nyaani daakamuu dhabuu isaati akka rakkataa jiru himan.
Medical update kun kan dhufees erga torbaan tokko darbe wayta yaadanno mucaa duaa kan waggaa 11 tae Michael Jaramillo bakka Raging River Ride irrati erga tae booda akka tae himan.